Butlins repair reporting
Butlin सम्पत्ति सेवा मरम्मत रिपोर्टिंग प्रणालीमा स्वागत छ।
तपाईले यो व्यवस्थापन गर्ने सम्पत्तीमा कुनैपनि मुद्दाहरू हामीलाई सूचित गर्न यो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया सम्भव रूपमा वर्णनात्मक हुनुहोस् र जब तपाईं सक्नुहुँदा समस्याको तस्बिर प्रदान गर्नुहोस्।
आम्दानीको अवस्थामा सामन्य क्षेत्रमा पोस्ट गरिएको आपतकालीन संख्याहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पत्तीमा एकल शौचालय
चुहावटका लागि कति कन्टेनर चाहिन्छ?
(please select) कप बाउल बाल्टिन स्नान अन्य
तपाईंले यसलाई कति पटक खाली गर्नुपर्दछ?
(please select) हरेक केहि मिनेट 15 मिनेट 30 मिनेट घण्टा एक दिनमा केही पटक दैनिक अन्य
(please select) लगातार रुकावट अन्य
ठेगाना द्वारा खोज्नुहोस्
के यस एकाइमा कमजोर कमजोर छ ?
Butlins - मरम्मत व्यवस्थापन सफ्टवेयर द्वारा संचालित छ